सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघले उत्पादन र निर्यातमूखि योजना ल्याउने छ | Sindhu Jwala
सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघले उत्पादन र निर्यातमूखि योजना ल्याउने छ
होमबहादुर बस्नेत (राजकुमार) (अध्यक्ष) सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ
सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघको चैत्र ७ गते भएको २५ औं साधारणसभा तथा १० अधिवेशनबाट होमबहादुर बस्नेत (राजकुमार) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा ईमान्दार छवी बनाएका बस्नेत जिल्ला देखी राजधानी सम्मका धेरै व्यापारी व्यवसायी माझ लोकप्रियता बनेका छन् । अत्यान्त सरल, मिजास र सहयोगी भावना बोकेका नव निर्वाचित अध्यक्ष बस्नेतका भावी योजना के कस्ता छन् भनेर सिन्धुज्वालाका सम्पादक दिनेश दुलाले लिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक
१) बधाई छ यहाँलाई ?
२) यहाँ भर्खरै सम्पन्न सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघको २५ औं साधारमसभा तथा १० औं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । यो क्षणलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
१० औं माहाधिवेशनबाट मलाई पूर्व अध्यक्षहरु, संस्थापकहरु लगाएत वर्तमान अध्यक्षहरुले र मलाई मायाँ गर्ने अग्रज व्यक्तित्वहरुले अध्यक्ष पदमा निर्विरोध गराउनु भएको छ सर्वप्रथम त उहाँहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु । सिन्धुपाल्चोक भूकम्प लगाएत जिल्ला दैविप्रकोपले पनि थलथिलो भएको जिल्ला हो । यहाँ बाढीपहिरो र पछिल्लोपटक कोभिडले पनि उस्तै सताईरहेको छ । यसकारण पनि अहिले काम गर्न त्यति सजिलो छैन् । चुनौति छ तैपनि हामी साहास लिएर अगाडी बढ्ने छौं । यसकारण यस्तो अवस्थामा मलाई मायाँ गर्ने तमाम साथीहरुलाई धन्यवाद दिन पनि चाहान्छु ।
२) यहाँ लगाएत सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुमा सर्वसहमत रुपमा निर्वाचित भएको देखिन्छ । तर सहमतिको नाममा चयन गर्दा क्षेत्रीय र भेगीय हिसाबले कति समिटिएको पाउनुहुन्छ ?
साँच्चै भन्ने हो भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा धेरै व्यवसायी साथीहरु छन् । क्षेत्रीय र भेगीय हिसाबले ७÷८ हजारको संख्यामा सदस्य हुनपर्ने हो । तर सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघले कर लगाएर दर्ता गर्न पर्ने अवस्था बनेको छ । तैपनि हामीले कार्यसमिति चयन गर्दा क्षेत्रीय र भेगीय हिसाबले समेटेका भने पक्कै छौं । त्यस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका पनि समेट्दै लैजाने भन्ने अभियानमा लागेका छौं । यसलाई पनि अर्को कार्यकाल सम्म अझ सक्षम गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समेटेर लैजान जरुरी छ । सिन्धुपाल्चोकमा मूख्य बजार भनेको चौतारा, बाह्रबिसे, मेलम्ची र जलविरे बजार रहेको छ । त्यस्तै अरु गाउँपालिकाहरुलाई पनि समेटेर जाँदा पक्कै पनि भविश्यमा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामी त्यो प्रयत्न गर्नेछौं ।
३) उद्योगवाणिज्य संघमा पनि केही समस्या र चुनौतिहरु होलान । ति समस्या र चुनौतिहरुलाई यहाँको नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिले कसरी समाधान गर्न सक्ला ?
उद्योगवाणिज्य संघको विधानमा उल्लेख गरेअनुसार अध्यक्ष लगाएत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुमा सकेसम्म सहमति र नसके मतदानको प्रक्रियाद्वारा १७ जना निर्वाचित गराउने प्रचलन छ । त्यसपछि पहिलो वैठकले १३ जना मनोनित गर्न पाउने प्रावधान अनुसार मनोनित गरेका र्छौं । त्यसलाई समग्र रुपले पदाधिकारी साधारणसभाले केही विधानहरु पाश गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गईयो । साँच्चै नै अहिले यहाँले भने जस्तै केही समस्या र चुनौतिहरु पनि छन् । काम गर्नको लागि अलि असहज स्थिति बनीरहेको जस्तो देखिन्छ । यसको निराकरण हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।
४) सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक प्रकोप लगाएत विपदका घटनाले अक्रान्त बनीरहेको छ । अब यहाँको कार्यकालमा यो अवस्थाबाट कसरी अगाडी बढ्ने सोच्नु भएको छ ?
यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि हामीलाई सजिलो छैन् । यसको लागि हामीले नयाँ योजनाहरु, नयाँ कार्यक्रमहरु अन्र्तगत यहाँका व्यवसायीहरुलाई भेगीय, क्षेत्रीय हिसाबले समेट्ने छौं । आफ्नो उत्पादनलाई जिल्लाबाट सबभन्दा नजिकै ठूलो जनसंख्या र घनत्व भएको राजधानी शहर काठमाडौं छ त्याहाँ पु¥याउन सकिन्छ । पक्कै पनि हामीले बाहिरबाट ल्याउनु भन्दा यहि आधुनिक खेती किसान अथवा अहिले कालिज, टर्की, खसी, कुखुराहरु लगाएत अर्गानिक खेती गर्न सकेर हामीले काठमाडौंको बजारलाई पु¥याउन सक्यौं भने पक्कै पनि सिन्धुपाल्चोक बासीले आर्थिक रुपमा सम्पन्न र समृद्व बन्न सक्छ जस्ते मलाई लाग्छ । सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघले भविश्यले एउटा पुलको काम गर्ने छ । व्यवसायी कृषकहरुलाई समेटेर केही सुधार ल्याउन पर्ने देखिएको छ । यसलाई हामीले प्रथामिकताका साथ लाने सोच बनाएका थियौं ।
५ यहाँ दशौं अधिवेशनबाट निर्वाचित भईरहँदा सर्वप्रथम के कुरालाई प्राथमिता दिनुहुन्छ ?
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला धार्मिक पर्यटकीय र कृषिमा आधारित छ । यसैबाट हामीले गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ । हिजो तातोपानी नाका चल्दा खेरी दशौं हजार मानिसहरु शनिबार घुम्न जान्थे । जब भूकम्पले थिलो थिलो बनायो । अहिले धेरै प्रतिशत कमि छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यस्तै धार्मिक रुपमा पनि हामीले प्रचारप्रसार गर्न सक्यौं भने भैरबकुण्ड लिस्तीमाई, क्षमादेवी, चौताराको भिमेश्वर, पाल्चोकी, हेलम्बु, भोटेचौरको चिया बगान पर्यटनलाई जोडेर प्रचारप्रसार गर्न सकियो भने पक्कै पनि यहाँ धेरै मान्छेहरुले रोजगारी पाउँथे । जसले आर्थिक उन्नती हुन सक्थो भन्ने लागेको छ । त्यसका साथसाथै कृषि पनि प्रमुख हो जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि नयाँ खेतीहरु प्रवृतिहरु सहकार्य गरेर कृषकहरुलाई अझ त्यससम्बन्धी ज्ञान दिने योजना रहेको छ । संस्थाले भनेको पुलको काम गर्ने हो त्यसलाई सहजीकरण गराउने छौं । यसमा पक्कै पनि हामी अगाडी बढ्छौं भन्ने मलाई लागेको छ ।
६ अन्त्यमा यस मिडिया मार्फत यहाँको थप भनाई केही छ की ?
कार्यसमितिमा सम्पूर्ण सदस्यहरु, पूर्व अध्यक्षहरु, संस्थापन अध्यक्षहरु र निवर्तमान अध्यक्षज्युहरु सबैले मलाई निर्विरोध निर्वाचित गर्नु भएकोमा उहाँहरुलाई म हृदय देखि नै हार्दिक नमन र धन्यवाद दिन चाहान्छु । म आज निर्विरोध हुँदै गर्दा उहाँहरुको मायाँ, सदभाव र विश्वासले मलाई अगाडि बढाउनु भएको छ । उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु । यस्तै मिडियाको तर्फबाट यहाँहरुले सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघको कार्यक्रम र उद्देश्य तथा मेरो भनाईलाई जनतासंग पु¥याईदिनु भएकोमा यहाँ र यहाँको मिडिलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । धन्यवाद ।
This entry was posted in अन्तर्वार्ता, अर्थ. Bookmark the permalink.
सभामुख सापकाेटा लिदी पुगे, घटना स्थलमा उद्दार जारी , अझै ३६ वेपत्ता
भोटेकोशी गाउँपार्टी कमिटिले ग¥यो प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन, अध्यक्षमा लाक्पा
पूर्वमिस नेपालको प्रेम चर्चा